Hangzhou AODI Electronic Control Co., Ltd (AODI ishaja), etholakala Hangzhou edolobheni, eduze Xiaoshan kanye Shanghai Airport, is a professional ehamba phambili zobuchwepheshe ibhizinisi entsha amandla izimoto kagesi imishini industrial. Njengoba ilungu asekelayo National Innovation Fund, sizibophezele izinsimbi izinga esitebeleni, ukusebenza kahle eliphezulu imikhiqizo electronic.
Kuze kube manje, siba 7 imikhiqizo series ukuze Electric Auto Izimoto, kuhlanganise nomoya-selehlile ebhodini ibhethri amashaja, amanzi selehlile ebhodini ibhethri amashaja, DC / DC lokuguqulela, oludidiyelwe air-selehlile ukushaja, okuhlangene amanzi selehlile ukushaja uhlelo, uhlelo ibhethri management system (BMS), idatha Intelligent esibulalayo ukushaja APP nendodana on.We kukhona yinto yokuqala yobuchwepheshe ibhizinisi ngedatha ezihlakaniphile ukugcina ukushaja uhlelo APP e China.
Ngo-2015, sakha Mkhiqizo Ukuqamba nohlelo lokuphatha (SPIM) futhi lowo Mkhiqizo Control Management System ukuthuthukisa ikhwalithi bese wehlise ongaphakeme yesondlo isilinganiso ukufeza umgomo izinga 0PPM ngokusebenzisa ethula ngokuzenzakalela ukuhlolwa imishini kanye zokukhiqiza imigqa ngaphansi izinqubo esiqinile nokusebenza ukulawula isiqondiso . Manje sinawo amandla ukukhiqiza 50000 amayunithi amashaja kanye DC / DC converters ngenyanga.
Aodi Ishaja isiba umlingani wakho eduze nochwepheshe ukushaja izixazululo njengoba konke leli zwe liya liba kagesi.
Sikhonza ezindaweni ezinhlanu avelele imishini isicelo zezimboni: Aerial platform umsebenzi, Floor yokuhlanza imishini, Igalofu ezinqoleni, Material yokusingatha imishini izithuthuthu Electric.
"Ukuqaphela Quality" zihlale engqondweni abantu AODI, kungukungcola isimiso sethu ngokuhambisana futhi sifeze IATF16949: 2016 / ISO9001: 2005 management system.
Vumela abasebenzisi bazi AODI,
Ukudala inani abasebenzisi,
Ukuzuza amaphupho AODI Abantu,
Ukunika emuva umphakathi
Njalo nokuThuthukiswa esitebeleni
Umthwalo wethu Wemfanelo
Nikeza emuva umphakathi